လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမယ့်ကိစ္စကို ဖုံးဖိပေးနိုင်တဲ့သူကို အရှင်မြတ်က ကေယာမတ် တရား စီရင်မယ့်နေ့မှာထိုသူ့ရဲ့ အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ် | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← နဗီတမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အကြောင်း
“ဂျန္နသွလ် ဘကီး” →
မေး။ ။စလာမ် ကိုနေစိုးခင်ဗျာ- လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမယ့်ကိစ္စကို ဖုံးဖိပေးနိုင်တဲ့သူကို အရှင်မြတ်က ကေယာမတ် တရား စီရင်မယ့်နေ့မှာထိုသူ့ရဲ့ အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မဟာတမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကမိန့်တော်မူ ထားတဲ့ အကြောင်း နဲ့ပတ် သက်ပြီး ရှင်းပြပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးမှန်ချင်မှမှန်ပါ့ တယ် ပြင်ဆင်ပြီးဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်ကိုကြီးရဲ့အထက်ပါမေးခွန်း၏ ရည်ညွန်းချက်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ စစ်မှန်ခိုင်လုံသည့်အဟီးဒ်တော်များသည် ဟဒီးသ်ကျမ်းအသီးသီးတို့မှာလာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ယခုမျှဝေပေမည့်ဟဒီးသ်တော်သည် စစ်မှန်ခိုင် လုံသော တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ဟဒီးသ် တော်တစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးအနည်းငယ်ရှင်းလင်းတင်ပြမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၎င်းဟဒီးသ်တော်ကို ဗုခါရီ ၊မွတ်စ်လင်မ် ၊မုစ်နဟ်အဟ်မဒ်၊ စူနန်အဗီဒါဝူဒ်၊ သေရ်မေဇီ၊ နဆာအီ၊ အိဗ်နုမားဂျဟ်၊ ဆွဟီးဟိုင်း အလ်ဟားကင်မ်၊ အိဗ်နုဟိဗ်ဗားန် စတဲ့ကျမ်းအသီးသီး များတွင် ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه: كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة” متفق عليه .
عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
မွတ်စ်လင်မ်များသည် အချင်းချင်း (အစ္စလာမ်သာသနာတော်အားအကြောင်းပြုကာ)ညီရင်းအစ်ကိုမောင်ရင်းနှမများပင်ဖြစ်ကြ၏။ ရှင်းလင်းချက်။ ။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်မိမိ၏ကျမ်းတော်မြန်ကုရ်အာန်တွင် မုအ်မင်န်၊ မွတ်စ်လင်မ်များသည် အချင်းချင်း အစ္စလာမ့် သာသနာတော် အားအကြောင်းပြုကာ ညီရင်းအစ်ကိုမောင်ရင်းနှမများပင်ဖြစ်ကြသည်ဟုများစွာသောအာယသ်တော်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ယင်း အာယသ်တော် များ အားခြေခံ၍ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မှအထက်ပါအတိုင်းပြန်လည်မိန့်မြွတ်ခဲ့၏်။
မုအ်မင်(န်)သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့မှာ (အချင်းချင်း) ညီအစ်ကိုများသာဖြစ်ကုန်၏။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် မိမိတို့၏ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်၏ စပ်ကြားဝယ် ရန်ငြိမ်းအောင်(စေ့စပ်မှုကို) ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြလေကုန်။ ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ကြလေကုန်။ သို့မှသာလျှင် အသင်တို့သည် သနားကရုဏာပြုတော်မူခြင်းကို ခံကြရကုန်အံ့သတည်း။
( فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً )(آل عمران:م103)
သို့ဖြစ်၍အသင်တို့သည် (ယခုအခါ) ထိုအရှင်မြတ် ၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် (မိမိတို့ အချင်းချင်း)ညီရင်းအစ်ကိုများပင်ဖြစ်ခဲ့ကြချေပြီ။
(فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)(الأحزاب:5)
သို့ရာတွင် အကယ်၍ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ဖခင်များကို မသိခဲ့ကြလျှင် ၎င်းတို့သည်အသင်တို့၏ သာသနာဝင်ညီအစ်ကိုများ ဖြစ်ကြသည့်ပြင်၊အသင်တို့၏ အဆွေခင်ပွန်းများလည်း ဖြစ်ကြကုန်၏။ စင်စစ်သော်ကား အသင်တို့အပေါ်၌ အသင်တို့ မေ့မှား၍ပြုမူခဲ့ကြကုန်သော အမှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ အပြစ်တစ်စုံ တစ်ရာ မရှိပေ။ သို့ရာတွင် အသင်တို့၏စိတ်က ကြံရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြကုန်သော အမှုကိစ္စ၌မူ(အပြစ်)ရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်သော်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သည် အလွန်တရာ ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူသောအရှင်၊ အလွန်တရာ သနားကြင်နာတော်မူသော အရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
အထက် တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပါအာယသ်တော်များအရ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် မွတ်စ်လင်မ်များသည် အချင်းချင်း ညီရင်းအစ်ကိုမောင် ရင်းနှမများပင်ဖြစ်ကြသည်ကို ကွက်ကွင်းစွာမီးမှောင်းထိုးပြနေလေ၏။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးအပြန်အလှန် နားလည်ခွင့် လွှတ်ခြင်း၊ဖေးမ ကူညီခြင်း၊စာနာနားလည်ပေးခြင်း၊အတိဒုက္ခများ ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ကောင်ရာညွန်ခြင်း၊မကောင်းမှုမြစ်တားခြင်း၊ စတဲ့ကိစ္စရပ် များကို အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ပေးကြရမည်၊ သာသနာ့ညီအစ်ကိုများသည် မိဘမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသည့် ညီအစ်ကိုများထက်ပင်ရင်းနှီးကြ၏ မိဘမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာကြ သည့်ညီအစ်ကိုများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်များ နင့်ထက်ငါသာ မနာလိုဝန်တိုမှုအမုန်းတရားများပင် ရှိခဲ့ကြ၏ ။ သာသနာ့ညီအစ်ကိုများမှာမူ ဖေါ်ပြပါ အချက်များမရှိကြ၍တပြေးညီအခွင့်အရေးများရှိကြကာ အပြန်အလှန်မျှတမှုတို့ဖြင့်နား လည်မှုပို ၍ရှိကြ၏။
မွတ်စ်လင်မ်ညီနောင်အချင်ချင်း တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အပြန်အလှန် အသက်၊အိုးအိမ်၊စည်းစိမ်၊ဂုဏ်သိက္ခာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ စတဲ့အားလုံးအပေါ်မတရားသဖြင့်ငြင်းပန်းနှိပ်ဆက်ခြင်း၊သတ်ဖြတ်ခြင်း၊လွန်ကျူးခြင်း၊ဆဲဆိုခြင်း၊ရိုင်းပြခြင်း၊အပုတ်ချမကောင်းပြောခြင်း၊အတိဒုက္ခရောက်အောင်သွယ်ဝိုက်နည်းသော်လည်းကောင်း၊တိုက်ရိုက်နည်းသော်လည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမပြုရ ။
တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မိမိညီနောင်မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဦးအပေါ် အသက်၊အိုးအိမ်၊စည်းစိမ်၊ဂုဏ်သိက္ခာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ စတဲ့အားလုံးအပေါ်မတရားသဖြင့်ငြင်းပန်းနှိပ်ဆက်ခြင်း၊သတ်ဖြတ်ခြင်း၊လွန်ကျူးခြင်း၊ဆဲဆိုခြင်း၊ရိုင်းပြခြင်း၊အပုတ်ချမကောင်းပြောခြင်း၊အတိဒုက္ခရောက်အောင်သွယ်ဝိုက်နည်းသော်လည်းကောင်း၊တိုက်ရိုက်နည်းသော်လည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း
ပြုလုပ်လာပါက မိမိညီနောင်ဘက်မှအကာအကွယ်ပေးရမည်။ မိမိဘက်မှလည်းဖေါ်ပြပါထိခိုက်နစ်နာမှုမျိုးမိမိညီနောင်အားမပြုလုပ်ရ။
والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه”
အကြင်မည်သူမဆို (အရှင်မြတ်၏ကျေးကျွန်)မိမိညီနောင်မွတ်စ်လင်မ် တစ်ဦးဦး၏် ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ဘာသာရေး ၊ဂုဏ်သိက္ခာ၊ဆင်း ရဲအကြပ်အတည်း အတိဒုက္ခ စတဲ့လိုအပ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်း၊အကာအကွယ်ပေး၊ ကူညီပံ့ပိုး၊ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေး ပါက၎င်းသူအား လည်းအလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ဘက်တော်မှပြန်လည် အထက်ပါမိမိလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းလျော့နည်းမှုမရှိကူညီပံ့ပိုးပေးမည်။
(အချားသောဟဒီးသ်များတွင် လောကီလောကုတ်နှစ်ဌာနစလုံးတွင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်မှပြန်လည်တုန့်ပြန်ပေးမည်။ အဗူဟူရိုင်ရာဟ်(ရသွီ) သခင်ကြီးဆင့်ဆိုခဲ့ သည့် အဒီးသ်တော် ဟဒီးသ်ကျမ်းအသီးသီးတို့တွင်ဖေါ်ပြထားပေသည်)
ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
အကြင်မည်သူမဆို မိမိညီနောင်မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဦးအား လောကီ၌ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှု၊ဝမ်းနည်းပူဆွေသောကမှု၊ ဆင်းရဲအကြပ်အတည်း၊ အတိဒုက္ခ၊ စတဲ့အရာများအား လွယ်ကူချောမွေ့ပြေလည်ပပျောက်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးသူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ၎င်း သူအားလည်းကေယာမသ်နေ့ တွင် ၎င်းသူကြုံတွေရမည့် စိုးရိမ်ကြောင့်လန့်ခြင်း၊ဝမ်းနည်းပူဆွေသောကအကြပ်အတည်း အတိဒုက္ခ စတဲ့အရာများအား ပြေ လည်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးမည်။
(အချားသောဟဒီးသ်များတွင် လောကီလောကုတ်နှစ်ဌာနစလုံးတွင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်မှပြန်လည်တုန့်ပြန်ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်။( အဗူဟူရိုင်ရာဟ်(ရသွီ) သခင်ကြီးဆင့်ဆိုခဲ့ သည့် အဒီးသ်တော် ဟဒီးသ်ကျမ်းအသီးသီးတို့တွင်ဖေါ်ပြထားပေသည်)
အကြင်မည်သူမဆို မိမိညီနောင်မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရှက်၊ဂုဏ်သိက္ခာ၊စတဲ့ကျဆင်းစေမည့် အရာများအား အကာအကွယ်ပေး၊ဖုံးအုပ်ပေးပါက အကြင်သူအားလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ ၎င်းသူ၏ အရှက်၊ဂုဏ်သိက္ခာအား ကေယာမသ်နေ့တွင်ပြန်လည် အကာအကွယ်ပေး၊ဖုံးအုပ်ပေးမည်။ (အချားသောဟဒီးသ်များတွင် လောကီလောကုတ်နှစ်ဌာနစလုံးတွင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်မှပြန်လည်တုန့်ပြန်ပေးမည်။ အဗူဟူရိုင်ရာဟ်(ရသွီ)သခင်ကြီး ဆင့်ဆိုခဲ့ သည့် အဒီးသ်တော် ဟဒီးသ်ကျမ်းအသီးသီးတို့တွင်ဖေါ်ပြထားပေသည်)
ဗုခါရီ ၊မွတ်စ်လင်မ်၊မုစ်နဟ်အဟ်မဒ်၊ စူနန်အဗီဒါဝူဒ်၊ သေရ်မေဇီ၊ နဆာအီ၊ အိဗ်နုမားဂျဟ်၊ ဆွဟီးဟိုင်း အလ်ဟားကင်မ်၊ အိဗ်နုဟိဗ် ဗားန်၊ ရေ ယားဒွဆ်ွဆွားလေဟီးန်။
အဗူဟူရိုင်ရဟ် (ရသွီ)သခင်ကြီး၏ဆင့်ဆိုခဲ့သောဟဒီးသ်တော်အားအောင်တွင်တင်ပြပေးထားပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်သာအမှန် တရား ကိုသိမြင်တော် မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ ။( ကိုနေစိုး)
وفي الصحيحين، وجامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه, ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة)) .
وفي (صحيح مسلم) و(مسند أحمد)، و(سنن أبي داود) و(الترمذي) و(النسائي)، و(ابن ماجه)، و(صحيحي الحاكم وابن حبان)
وفي (صحيح مسلم) و(مسند أحمد)، و(سنن أبي داود) و(الترمذي) و(النسائي)، و(ابن ماجه)، و(صحيحي الحاكم وابن حبان) من حديث أبي هريرة مرفوعاً، ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))
This entry was posted in မစာအိလ် ရှင်းလင်းချက်, အထူးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.